वि.सं. २०७३ साल माघ २७ गते, बिहीबार,इश्वी सन् २०१७ फेब्रुवरी ९ तारिख, शकसंवत् १९३८,सौम्य संवत्सर, उत्तरायण, शिशिर ऋतु, नेपाल संवत् ११३७ सिल्लाथ्व,माघ शुक्लपक्ष, तिथि– त्रयोदशी, ८:५३ बजेउप्रान्त चतुर्दशी,नक्षत्र– पुनर्वशु, १०:३८ बजेउप्रान्त तिष्य, योग– आयुष्मान्, २७:१४ बजेउप्रान्त सौभाग्य,करण– तैतिल, ८:५३ बजेदेखि गर, २०:०५ बजेउप्रान्त वणिज,आनन्दादिमा सिद्धि योग,चन्द्रराशि– कर्कट, सूर्योदय– ६:४८ बजे, सूर्यास्त– १७:५० बजे र दिनमान २७ घडी ३४ पला, सौभाग्यसूर्पदान। १०:३८ बजेदेखि गुरु-पुष्य योग
वि.सं. २०७३ साल माघ २८ गते, शुक्रबार, इश्वी सन् २०१७ फेब्रुवरी १० तारिख,शकसंवत् १९३८, सौम्य संवत्सर,उत्तरायण, शिशिर ऋतु,नेपाल संवत् ११३७ सिल्लाथ्व, माघ शुक्लपक्ष, तिथि– चतुर्दशी, ७:२२ बजेदेखि पूर्णिमा ३०:१३ बजेउप्रान्त प्रतिपदा,नक्षत्र– तिष्य, ९:४९ बजेउप्रान्त अश्लेषा, योग– सौभाग्य, २५:०३ बजेउप्रान्त शोभन,करण– वणिज, ७:२२ बजेदेखि भद्रा, १८:४४ बजेपछि वव ३०:१३ बजेउप्रान्त वालव,आनन्दादिमा उत्पात योग,चन्द्रराशि– कर्कट,सूर्योदय– ६:४७ बजे, सूर्यास्त– १७:५० बजे र दिनमान २७ घडी ३८ पला।वर्त/पर्व- पूर्णिमा व्रत, पशुपतिनाथको छाया दर्शन, श्रीस्वस्थानी व्रत समाप्ति,झापामा कीचकवध मेला,माघस्नान समाप्ति, सिपुन्ही, माघयात्रा।
सुरुमा बोलीको प्रभावमा अरुलाई विश्वास दिलाउन सफलभई आफ्नो कार्य अघि बढान सकिनेछ,आजको शुभ अंक ९ रहेको छ।
वाद विवादमा परिएला,सचेत रहनुहोस,निर्णय गलत ठाउ“मा पर्नाले फाइदा अर्कैका हातमा जानेछ,आजको शुभ अंक ६ रहेको छ।
जोश र जाँगर बढ्ने आफ्नै प्रयासले नयाँ कामहरू प्राप्त हुनेछन्,भौतिक साधनहरू जुटाउन सकिनेछ,आजको शुभ अंक ७ रहेको छ।
गोपनीयतामा ध्यान दिनुहोला,नोकरी तथा राजनीतिमा बुद्धिको उपयोग गरे लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न सकिनेछ,आजको शुभ अंक १० रहेको छ।
कान कमजोर भएकोले विनाकारण शंका उपशंका आफन्तहरुसँग बढ्नेछ,मानसिक तनाव उच्च विन्दुमा पुग्ने,आजको शुभ अंक ५ रहेको छ।
पाएको जिम्वेवारी पुरागर्न पूर्णरूपमा सफलहुनुहोला,काम सामान्य भए पनि राम्रो आम्दानी हुनेछ,आजको शुभ अंक १ रहेको छ ।
उठ्नुपर्ने रकम हातलागी भए पनि तत्काल खर्चनुपर्ला, कर्म योगका थप बाटाहरू खुल्नेछन्,आजको शुभ अंक ३ रहेको छ।
केही अनियन्त्रित खर्च पनि हुनेछ,पढाइमा अरु प्रगति हुनेछ, जोश र जाँगर बढ्नेछ,आजको शुभ अंक ११ रहेको छ।
अपेक्षा नगर्दा असन्तोषमा कमि सकिनेछ,व्यापारमा संकट आउने, यात्रामा अवरोध हुने,आजको शुभ अंक १२ रहेको छ।
गोपनीयतामा जोडदिनुहोला,नोकारीमा समस्या आउनेछ, स्थानान्तरण हुने,राज्यबाट सम्मान हुने,आजको शुभ अंक ८ रहेको छ।
व्यापारमा अवरोध आउने,यात्रामा समस्या आउने, धार्मिक क्रियाकलापमा रुचि जाग्नेछ,आजको शुभ अंक ५ रहेको छ।
पति–पत्नीबीच विवाद प्रशस्तबढ्नेछ,घरेलु समस्याले सताउने,मित्र र आफन्त हरुले धोका दिने भएकोले मन चिन्तित हुनेछ
गोरो छालाको लागि खानुस् कालो खाना